Musiliimota Indiyaa: 'Biyya kanatti lammii lammaffaa taanee sodaatiin jiraanna' - BBC News Afaan Oromoo
Musiliimota Indiyaa: 'Biyya kanatti lammii lammaffaa taanee sodaatiin jiraanna'
Madda suuraa, Nikita Deshpande/BBC
Raakiit Haashiim Hindiitti Musliima tahuun na yaaddessaa jira jetti
Akkuma Musliimota Indiyaa biroo egereen koo maal taha jechaan guyyaa koo dabarsa. Sababii amantii kootiin hojii nan dhaaba laata? Mana koorraa nan buqqa'aa laata? Namoonni gurmuudhaan na ajjeesuu? Sodaan kun yoom dhaabata?
Hokkora Yunivarsiitii Jaamiyaa Milliyaa Islaamiyaa, Niiw Dalihiitti uumameen booda. ''Garaa-bal'adhu,'' naan jetti haati koo.
Barattoonni sababii seera haaraa bahe waliin wal-qabatee reebamaa, gaaziin imimmaanessu itti gadhiifamaafi yaaddoo guddaa keessa jiru.
Seeri kun amantiiwwan ja'aaf mirga lammummaa gaafa kennu -Musliimota Baanglaadesh, Paakistaan fi Afgaanistaan irraa dhufaniif garuu hin hayyamu.
Ijoollee dubara Hindii hin barbaadamne mil. 21
Muslimoonni qofaatti dha kan qoodaman, loogii kanatu barattoonni akka mormiitti bahan taasise.
Poolisiin barattoonni konkolaataawwanitti ibidda gatii qabsiisaniifi jedheera, ragaa garuu hin agarsiifne.
Dhukaasni tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru, warri hospitaala keessa ciisan hoo eessaa dhufan?
Ani yunivarsiitii dhaa fayyaa ilkaaniin baradha, kana duras mormii nagaa qabeessa argee beeka.
Mormii kanarratti hin hirmaanne bu'aan haleellaa poolisii garuu anaanis na qaqqabaati jira.
Gamoo keessa jiraannu yeroo poolisiin dhufu sodaa guddaa keessa turre. Akka hin mul'anneef ibsaa keenya dhaamsinee turre. Halkan sun darbee carraa-qabeessa taanee hafne.
Komii kee dhiyeeffattee dhiistee homaa garaagarummaan hin jiru. Nuti duruumaa warra rakkoon itti aggaamame dha.
Musliimota Hindii haaroftee.
Dur ganama gaafa kaanu faaruuwwan Hinduu dhageenya ture.
Naannoo Odishaa jedhamtu kan warri Hinduu keessa jiraatan maatiin Musliimaa unu qofaa turre.
Ayyaanota keenya waliin kabajna isaan yeroo Idaa hiinnaa nuuf dibu. Obbolaan keenyis yeroo ayyaana isaanii Naavraatirii halkan sagal achitti dabarsu.
Hiriyyonni koo kaanis nyaata keenya Biriyaanii jedhamu nyaachuuf mana keenya dhufu.
Maatiin keenyi Musliima tahuufi sirna amantii isaanii gaggeessuuf yaddoo qabaatanii beekan.
Mana barumsaattis rakkoon akkasii argee hin beeku yeroo tokko qofa barataan hiriyaa koo tokko, ''isin yeroo hunda dhaqna dhiqattuu jedhee na gaafatee beeka, eeyyeen jedhee deebiseef anis.''
Amantiin qaama jireenya keenyaa haa tahuyyuu malee, Musliima tahuu akka eenyummaa kootti ilaalee hin beeku.
Namoonni akka foon namaa nyaannutti nu ilaalaa jiru. Kan dubartii gudeednu, shororkeessitoota Paakistaaniif falmiinu, kan warra Hinduu amantii keenyatti geeddarrufaa itti fakkaata. Biyya kanas kan jalaa fudhannu godhaniitu nu yaadu.
Kanaaf, lammiiwwan lammaffaa sodaan jiraannu tahuuf jirra.
Ministirri Mummee Hindii Naareendraa Moodii,''yeroon kun yerootti nagaa, tokkummaafi obbolummaa itti jabeessinu dha jedhan. Namoonni hokkora uumanis kaameeraatiin waraabamu, wayyaa isaaniitinis adda baasan,'' jedhan ministirri mummee, kunimmoo haleellaa amantii koo irratti taasifamaa jiru dha.
Ani shamarree ganna 16 ture yeroon hijaab uffachuu jalqabe.
Yeroon Yunivarsiitii Musliimaa Aliigaah gale dubartoonni akkuma kana mataa isaanitti guftaa uffatu.
Yeroon sana argu gammadeen hijaaba akka mallattoo eenyummaa koottin keewwachuu jalqabe.
Amma waggaa 22tti loogii fi oduu sobaa kana mormuudhaaf dirqameen jira.
Garuu yeroo hundumaa yaada koo ministira mummee mormeen yoon ibsu farra biyyaafi warra Hindii akkan tahetti dhan namoonni kan na ilaalani
Addunyaa sabboonummaafi amantii wal-keessa jiru keessa jiraachaa jirra. Yeroon hijaaba uffadhee deemu namoonni ija natti babaasu, sodaa sababa hin qabne tahuu danada'a garuu jibba Islaamaa karaa miidiyaafi mootummaa otuma ilaalluu babal'achaa jira.
Mootummaan biyya bulchu ilaalcha sabboontota Hinduutiin hogganama. Seerris amantii bu'uura godhachuuni kan bahu. Kunimmoo yakka warri Musliimaa irratti raawwatamuuf humna kenna.
Muslimmoonni Hindii miiliyoona 200...
Sodaan keenyi dabaleera. Dhimma seera mirkana lammiilee hundaa barbaadu irratti asaasineetu haasofna.
Ammas garuu Abdiin jira.
Deeggarsi warra nu jibban caalu argachaati jirra, kuni warra sababeessuufi namummaa dura dhaabbatan ni dammaqsa jedheen abdadha.
Ammaaf garuu Addunyaan koo lamatti hiramaa jira gatii taheef callisaan nan eggadha.
Iddoon jiraadhuutii buqqa'ee dirqamaan boqonnaa akkan fudhadhu taasifameera. Maatii koos dhaqee arguu hin danda'uu sababiinsaa immoo lafa isaan jiran mormii cimaatu jira.
Namoota yeroof dahoo naa kennan bira taa'een waan haati koo naa jette,''Garaa bal'adhu, humna kee sassaabbadhu.''
16 Muddee 2019
21 Hagayya 2019
Biyyoonni G7 karoora dhiibbaa Chaayinaa dura dhaabbachuu baafatan
13 Waxabajjii 2021
'Baayidan akka Tiraamp miiraan hin gaggeeffamu ta'a'